Tartanka kubbadda Cagta Degmooyinka Gobolka Banaadir oo si habsami leh u socda “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Tartanka kubbadda Cagta Degmooyinka Gobolka Banaadir oo si habsami leh u socda “SAWIRRO”
Tartanka Kubadda Cagta Degmooyinka iyo Deegaanada G. Banaadir 2021 ayaa si habsami leh uga socda garoomada kubbadda Cagta ee Injineer Yariisow iyo Muqdisho Stadium, kaasi oo ay u soo daawasho tegaan dadweyne aad u fara badan oo ka kala yimid degmooyinka Gobolka Banaadir.
Xulka Degmada Xamar Weyne ayaa 2-1 uga badiyay dhigooda deegaanka Garasbaaleey oo ay garoonka Muqdisho ku kulmeen.
Goolasha Xamar weyne waxaa u kala dhaliyay Cabdalla Maxamed Maxamuud iyo Anas Maxamuud Axmed.
Goolka Qura ee Garasbaaleey waxaa u dhaliyay Cabdirisaaq Cali Maxamed.
Dhanka kale Xulalka degmooyinka Shingaani iyo Warta Nabadda ayaa barbaro isla dhaafi waayay 0-0 kadib markii ay ku kulmeen garoonka Inj. Yariisow.
Kala sarreynta Group A:
1- Shingaani 2 kulan 4 dhibcood
2- Xamar Weyne 2 kulan 4 dbhibcood
3- Warta Nabadda 2 kulan 2 dhibcood
4- Garasbaaleey 2 kulan 1 dhibic
5- Gobadleey 2 kulan 1 dhibic
Madaxweynaha Galmudug oo saxiixay miisaaniyadda Galmudug 2022
Madaxweynaha Galmudug iyo Wafdi uu hogaaminayo oo soo gaaray Muqdisho “SAWIRRO”
Madaxweynaha Galmudug iyo Wafdi uu hogaaminayo oo soo gaaray Muqdisho "SAWIRRO"